लोकप्रिय युवा नेता एकाएक यसकारण भए सामाजिक सञ्जालमा बदनाम - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
२६ असार २०७६, बिहीबार १४:३० July 11, 2019 Sangeeta Aryal
काठमाडौ २६ असार । पछिल्लाे समय युवाहरुमाझ विश्वास अार्जन गर्न सफल रहेका युवा नेता गगन थापा फेरि विवादित बनेका छन् । केही समय अगाडि अमेरिकामा पढ्न लागेकाे फाेटाे सार्वजनिक भएपछि विवादमा अाएका उनी अहिले फेरि अर्काे विवादमा मुछिएका छन् ।
अहिले उनी अाफ्‍ना कारणले हाेइन, उनका बारेमा नेपालस्थित अमेरिकी दुतावासले लेखेकाे मेलका कारण विवादमा अाएका हुन् । त्याे मेल पनि अहिलेकाे हाेइन, १२ वर्ष पहिलेकाे । अमेरिकी दुतावासले अाफ्नाे एक गाेप्य मेलमा गगन थापालाइृ अाफ्‍नाे देश अमेरिकाकाे ‘कि एम्बेसी कन्ट्याक्ट’ भनेर उल्लेख गरिएकाे छ । त्यतिबेला चर्चित वेवसाइट विकिलिक्सले अमेरिकाका हजाराै दस्तावेजहरु सार्वजनिक गर्ने क्रममा याे मेल पनि सार्वजनिक भएकाे थियाे । त्यही मेल केवलमा गगन थापाका बारेमा नेपाल स्थित अमेरिकी दुतावासले लेखेकाे यस्ताे कुरा फेरि अहिले चर्चामा अाएपछि उनी विवादमा अाएका हुन् । उक्त मेलले थापा अमेरिकाकाे विशेष एजेन्ट हाे भन्ने जनाउँछ । यद्यपि थापाले अमेरिकी दुतावासले किन त्यस्ताे लेख्याे भन्ने बारेमा अाफूलाइृ केही जानकारी नरहेकाे भन्दै त्यसकाे खण्डन गरेका छन् ।
यसअघि नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति स्व. गिरिजा काेइरालाले गगन थापालाइृ दरवारियाकाे अाराेप पनि लगाएका थिए । नेपाल विद्यार्थी संघको पोखरा महाधिवेशनमा गगनले अध्यक्ष बन्ने चाहना राख्दा पार्टीका तत्कालीन सभापति स्व. कोइरालाले उनलाई उक्त अाराेप लगाएका हुन् । पोखरा महाधिवेशनमा त्यतिखेर गगनको पक्षमा जनमत बढेपछि कोइरालाले भनेका थिए ‘गगन थापा र नरहरी आचार्य दरबारिया हुन् ।’
पछि तिनै गगन गणतन्त्रका कट्टर पक्षधरका रुपमा उदाए । उनी धेरै चर्चित बनेपछि बेलाबखत उनी कहिले भारतीय दूताबासको एजेन्ट त कहिले युरोपियन यूनियनको पैसामा चल्ने नेता भनेर आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । तर, त्यस्ता आरोपको अहिलेसम्म स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको भने छैन ।
तर, उनै गगनले आफ्नो बोली विपरित अर्वपति नेतृ एवम् स्व. गिरिजापुत्री सुजाता कोइरालालाई क्यान्सर उपचारका लागि ५० लाख दिने निर्णय क्याबिनेटमार्फत गराएका थिए । तर, त्यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि थापा आफैंले उक्त निर्णयको विरोध गरेको गरेको भनेर पन्छिएका थिए।
अहिले गगन थापालाई अमेरिकी एजेण्ट भनेर तथ्य नै सार्वजनिक गरि सामाजिक सञ्जाल र केही अनलाइनहरुमा छरपष्ट पारिएको छ । अमेरिकी राजदूताबासको एउटा पुरानो प्रतिवेदनले थापालाई विवादमा तानेको हो । सन् २००८ मा ‘Nepal countdown continues; 38 days telling Call Elections’ शिर्षकमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा गगन थापालाई ‘Key Embassy contact’ भनिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले मधेशीलाई धेरै नै अधिकार दिएको भनेर तराईमा रहेका पहाडी मुलका व्यक्तिहरुले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेलाई भोट दिन सक्ने पनि थापालाई उदृत गर्दै तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।प्रतिवेदनमा कांग्रेस कमजोर भएकाले संविधानसभाको निर्वाचन टार्न हत्कण्डा अपनाउन सक्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । थापाविरुद्ध उनैलाई उदृत गरी प्रतिवेदन नै सार्वजनिक भएपछि उनले पुरानो र कस्ले के भन्छ भन्दै पन्छिएका छन् ।